Ndị na-emepụta Lactoperoxidase (9003-99-0) - Chemical Chemical Phcoker
Lactoperoxidase bụ enzyme dị na mmiri ara ehi nke a maara na ọ nwere antimicrobial na antioxidant properties ………
Lactoperoxidase (9003-99-0) vidiyo
Lactoperoxidase (9003-99-0) Smmezi
Chemical Aha Peroxidase; LPO
molekụla Wasatọ 78 kDa
Agba acha ọbara ọbara-agba aja aja
Sume H2O: solu
Sịkwa akwa Tigwe Enwere ike idobe ntụ ntụ nke lyophilized na -20 Celsius. Guzobere maka ọnwa 12 na -20 Celsius.
Lactoperoxidase (9003-99-0) Isi nyocha
Lactoperoxidase bụ enzyme nke a na-ahụkarị na mmiri ara ehi nke amara na enwere ọgwụ antimicrobial na antioxidant. Dabere na nyocha nke edepụtara na Journal of Applied Microbiology, ọ nwere ihe ndị na-egbochi nje bacteria na-enyere aka akpụkpọ ahụ ma nwee ike iwepụ nje na-akpata mbufụt. Lactoperoxidase bụkwa ihe dị mkpa na ngwakọta ndị mejupụtara (LPO, glucose, glucose oxidase (GO), iodide na thiocyanate) ejiri gbochie yeasts, fungi, nje na nje na-eto na ịchọ mma na ngwaahịa ndị ọzọ mara mma (Isi Iyi).
Gịnị bụ Lactoperoxidase ?
Lactoperoxidase bụ glycoprotein nwere ọrụ mgbochi microbial, a na-eji ya dị ka ihe na-eme ka ọ kwụsie ike iji nyere aka melite nkwụsi ike na ndụ ngwaahịa. Ọ bụ ndammana na-apụta na mmiri ara ehi.
Nnyocha sayensị gosipụtara na Lactoperoxidase, enzyme nke nwere na mmiri ara ehi, na-egbochi mmeghachi nke kemịkalụ nke thiocyanate, nke a na-ahụkarị na mmiri ara ehi, na ọnụnọ hydrogen peroxide. Ihe mepụtara na-enwe mmetụta bacteriostatic na ọtụtụ nje bacteria na ọbụna nsonaazụ nje na ụfọdụ nje bacteria, dịka Escherichia coli.
Usoro Lactoperoxidase (LP-s) bụ otu n’ime ezinụlọ na - eto eto nke na - eto ndu nwere ike inwe nsonaazụ bara uru na nhazi mmiri ara ehi site na ịgbatị ndụ na melite ogo mmiri ara ehi anakọtara ma ọ bụ chekwaa.
N'afọ 2005, FAO na WHO mere nzukọ ọmụmụ maka uru na ihe ọghọm dị na LP-s nke nchekwa mmiri ara ehi, iji nye ndụmọdụ sayensị na Codex Alimentarius.
Ọrụ a na-aza maka mba ndị otu na-eche banyere ojiji nke LP-s, karịchaa site na ntuzi Codex ugbu a, nke na-egbochi itinye LP-s nchekwa nke mmiri ara ehi na mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi na-agaghị azụta ụwa.
Ọrịa mmetụta Lactoperoxidase
Enweghị ogwugwu mmetụta ọ bụla site na iji ngwaahịa nwere Lactoperoxidase na mkpokọta nkịtị.
Lactoperoxidase ntụ ntụ ojiji na ngwa
Lactoperoxidase bụ onye na-ahụ maka ọgwụ nje na-arụ ọrụ nke ọma. N'ihi ya, a na-achọta ngwa nke lactoperoxidase ntụ ntụ na ichekwa nri, ịchọ mma, na ihe ophthalmic. Ọzọkwa, lactoperoxidase achọtala ihe na ọgwụgwọ eze na ọnya ọnya. N'ikpeazụ lactoperoxidase nwere ike ịchọta ngwa dịka ọgwụ mgbochi na ọgwụ nje.
Mmiri ara ehi na ngwaahịa
Lactoperoxidase bụ ọgwụ ịgba ọgwụ mgbochi dị irè ma ejiri ya dịka onye na-egbochi nje bacteria na belata microflora nje na mmiri ara ehi na ngwaahịa mmiri ara ehi. Nrụ ọrụ nke usoro lactoperoxidase site na mgbakwunye nke hydrogen peroxide na thiocyanate na-eme ka ndụ nchekwa nke mmiri ara ehi jụrụ oyi. Ọ na - emegide oke okpomọkụ, a na - ejikwa ya dịka ihe na - egosi oke mmiri ara ehi.
A na-ekwupụta na usoro lactoperoxidase kwesịrị ekwesị maka ọgwụgwọ gingivitis na paradentosis. Ejirila Lactoperoxidase na ntacha eze ma ọ bụ nke a na-akọ ọnụ iji belata nje na-akpata ọnya na n'ihi ya acid na-emepụta.
Ngwakọta nke lactoperoxidase, glucose, glucose oxidase (CHINEKE), ayodiin na thiocyanate ka a na-ekwu na ọ dị mma na nchekwa nke ịchọ mma.
Ọrịa cancer na nje na-efe efe
Achọpụtala ọgwụ nwoke na ọnya glucose oxidase na lactoperoxidase ka ọ dị mma na-egbu mkpụrụ ndụ tumo na vitro. Na mgbakwunye, macrophages ekpughere lactoperoxidase na-akwalite igbu mkpụrụ ndụ cancer.
Pepoxidase emepụtara hypothiocyanite na-egbochi nje herpes simplex virus yana nje immunodeficiency mmadụ.
Nrụ ọrụ mgbochi nje nke ụfụfụ n'ọnụ na ike iji wepu biofilms. Jones SB, West NX, Nesmiyanov PP, Krylov SE, Klechkovskaya VV, Arkharova NA, Zakirova SA. Mepee BDJ. 2018 Septemba 27;
Nrụpụta dị mma nke sistemụ enzyme dabeere na mmiri. Nnwale nnwale abụọ na-achịkwa ìsì. Llena C, Oteo C, Oteo J, Amengual J, Forner L. J Dent. 2016 Jan
Nkuzi onu nwere ike ibelata onu oyi n’ilezi oria: a bu ihe omumu nke mbu. Maeda K, Akagi J.Dysphagia. 2014 Ọkt; 29